StorExcel AXZiS ပလက်ဖောင်းသည်အသိအမှတ်ပြု Quantum Xcellis သိုလှောင်ခြင်းစနစ်တွင်အကောင်းဆုံးမျိုးဆက်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲသည်။ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » နယူး StorExcel AXZiS ပလက်ဖောင်းအကောင်းဆုံး-of မွေးမြူရေးဘဝမှကယျတငျပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းချီး Quantum Xcellis သိုလှောင်မှုစနစ်အပေါ်
နယူး StorExcel AXZiS ပလက်ဖောင်းအကောင်းဆုံး-of မွေးမြူရေးဘဝမှကယျတငျပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းချီး Quantum Xcellis သိုလှောင်မှုစနစ်အပေါ်
Denver - ဧပြီလ 11, 2016 - StorExcel (TM), စကေးထွက်သိုလှောင်မှုပတ်ဝန်းကျင်မှာအဘို့မျိုးဆက်သစ်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာအလိုအလျောက်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုတီထွင်ပေးသူ, ယနေ့ StorExcel AXZiS (TM), ချောမွေ့စွာအကောင်းဆုံး-of ဖောက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းမှီဝဲတဲ့ turnkey စနစ်၏လွှတ်ပေးရန်ထုတ်ပြန်ကြေညာ အဆိုပါဆုရနဲ့အတူစီမံခန့်ခွဲမှု (DAM) ကွမ်တမ် high-performance ကို shared လုပ်ငန်းအသွားအလာသိုလှောင်မှုစနစ်အ Xcellis ။ အဆိုပါ 2016 မှာ၎င်း၏ပွဲဦးထွက်အောင် NAB ပြရန် Las Vegas မှာ, သစ်ကို StorExcel AXZiS ပလက်ဖောင်းကလွယ်ကူအကြောင်းအရာဖန်တီးသူပြုလုပ်ရန်အပေါ်ခိုင်မာတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု software ကို run နေအပြည့်အဝအားသာချက်ယူဘို့ကိုအဆုံးသတ်-to-end ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည် ကွမ်တမ်StorExcel နေဖြင့်အပြည့်အဝထောက်ခံမှုနှင့်အတူ '' s ကိုထူးခြားအစွမ်းထက်နှင့်စွယ်စုံ Xcellis သိုလှောင်မှုစနစ်, ။
"ဒီ StorExcel AXZiS ပလက်ဖောင်းတိုင်းအရွယ်အစားစစ်ဆင်ရေးပေးသည် - ဆက်ကပ်အပ်နှံဖန်တီးမှုအဖွဲ့များအနေဖြင့်ကြီးမားသောမီဒီယာလုပ်ငန်းတွေမှ - တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောအားဖြင့်စမ်းသပ်ပြီး, ပေါင်းစည်းနှင့်ပေးပို့ပြီးပါပြီကြောင်းသက်သေပြနည်းပညာများ၏လျင်မြန်စွာအကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက် ကွမ်တမ် မိတ်ဖက်, "လန်း Hukill, StorExcel မှာသမ္မတကပြောပါတယ်။ "ဟုအဆိုပါ 2016 မှာ NAB ပြရန်ကျနော်တို့ Xcellis အပေါ် running ဦးဆောင် DAM ဆော့ဖ်ဝဲ၏ပေါင်းစည်းမှုတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် - ကျနော်တို့က StorExcel AXZiS platform ပေါ်တွင်မိတ်ဆက်လိမ့်မယ်အများအပြားပေါင်းစပ် software ကိုဖြေရှင်းချက့်ပထမဦးဆုံး "။
တစ်ဦးအပြည့်အဝပေါင်းစည်းပလက်ဖောင်းအဖြစ်, StorExcel AXZiS အကြောင်းအရာဖန်တီးသူနှင့်ထုတ်လုပ်သူများခြွင်းချက်အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုနှင့်အတူမြင့်မားတဲ့-performing shared လုပ်ငန်းအသွားအလာသိုလှောင်မှုမှ၎င်းတို့၏ပြောင်းကုန်ပြီနှင့်ဆက်စပ်အချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်လျော့ချဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဲဒီအစားပေါင်းစည်းမှုနှင့်ထောက်ခံမှုများအတွက်ရောင်းချသူတစ်ဦးအမျိုးမျိုးနှင့်အတူအလုပ်ထက်အသုံးပြုသူများ StorExcel ဖို့တစ်ခုတည်းဖုန်းခေါ်နိုင်ပါတယ်။
StorExcel AXZiS တစ်ဦးလည်းပါဝင်သည် ကွမ်တမ် တစ်ဦးလုပ်ငန်းအသွားအလာဒါရိုက်တာက high-ရရှိမှုတစ်စုံနှင့် NFS / SMB သို့မဟုတ် San မှတဆင့်အသုံးဝင်သောစွမ်းရည်၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 412 terabytes ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့် QXS-60 RAID သိုလှောင်မှုစနစ်ဖြင့် Xcellis စနစ်။ Evolphin မှန်ဘီလူးနှင့် IPV ပြတိုက် - - ဇာတိ applications များအဖြစ် Xcellis system ပေါ်တွင်အပြေးအသစ် StorExcel ပလက်ဖောင်းလက်ရှိအသုံးပြုသူများကနှစ်ခု DAM ဆော့ဖျဝဲစနစ်များကိုတစ်ဦးရွေးချယ်မှုပေးထားပါတယ်။
StorExcel နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကအနည်းဆုံးရရှိနိုင် www.storexcel.com.
StorExcel တစ်ဦးပြန်လည်ရောင်းချသူများနှင့် System Integration, အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍစျေးကွက်များတွင်စကေးထွက်သိုလှောင်မှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြည့်ဆည်းကြောင့်လာမယ့်မျိုးဆက်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာအလိုအလျောက်ဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဟာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးနှင့်မစ်ရှင်-အရေးပါသောအချက်အလက်များ၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအရှိန်မြှင့်နေစဉ် clients များဟာသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချကူညီပေးသည်။ StorExcel ကုန်ကျစရိတ်-optimized မဟာဗျူဟာများ, ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်၎င်း၏ client များအတွက်အနာဂတ် Extensions များနှင့်အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုနှင့်အတူလက်ရှိစစ်ဆင်ရေးကိုဖြည့်ဖို့န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/StorExcel/StorExcel_AXZiS.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: StorExcel AXZiS ကိုးကားစရာဗိသုကာပညာ
တွစ်တာပေါ်မှာ Share: twitter.com/intent/tweet?text=StorExcel AXZiS အဆင့်မြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်ဘဝမှကယျတငျ ကွမ်တမ် Xcellis - goo.gl/roNwmM
အဆိုပါ 2016 မှာ StorExcel သွားရောက်ကြည့်ရှု NAB ပြရန်, ကွမ်တမ် Booth SL8416
Facebook က: www.facebook.com/storexcel
LinkedIn တို့: www.linkedin.com/company/storexcel
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲခြင်း AXZiS ပလက်ဖောင်း အကောင်းဆုံး-of မွေးမြူရေး ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow StorExcel 2016-04-14
ယခင်: ကျားနည်းပညာမိတ်ဆက်သီးခြားလုပ်ငန်းအသွားအလာ Manager ကို "Project မှအမှုတော်ကိုထမ်းရွက်": သတင်း NAB
နောက်တစ်ခု: Sound Devices နှင့် Dan Dugan တို့သည် NAB 688 တွင် 2016 Mixer / Recorder အတွက် Dugan Automixing ကိုတင်ဆက်ခဲ့သည်